momba ny endrika. Ankoatry ny endrika ivelany izay somary milamina kokoa noho ilay taloha dia azo vakiana soa amantsara amin'ny finday koa ny katolika.org. Io ilay antsoin-dry zareo vazaha hoe "Responsive", izany hoe afaka mamaly ny filàn'ny mpitsidika.
Faharoa dia momba ny votoatiny. Noezahina nampitomboina ny votoatiny ary natao mifanaraka amin'izay mety ho ilain'ny mpitsidika. Ny katolika.org mantsy dia natao indrindra mba hampahafantatra ny finoana katolika ho an'ny katolika aloha voalohany indrindra, izany hoe fanabeazam-pinoana, fa avy eo koa ho an'ireo hafa finoana izay liana amin'ny finoana katolika. Ny tanjona dia ny hamaly ireo fanontaniana mateti-pitranga eo amin'ny katolika, na avy amin'ny Katolika izany na avy amin'ny mpino hafa.
Fahatelo dia ny fiainam-pinoana isanandro. Ankoatra ny vakiteny isan'andro izay efa nisy teo aloha dia ezahina apetraka ihany koa ny hafatry ny Papa isan'andro amin'ny Twitter ka atao amin'ny teny malagasy izany. Eo koa ny olomasina isan'andro izay manampy betsaka amin'ny fiainam-pinoana ny fahafantarana ny tantarany.
Ary ny farany izay resaka teknika kokoa dia ny momba ny hafainganana. Malaky kokoa noho ny teo aloha ny milina satria nohavaozina sy nohamaivanina kokoa.
Ireo fanavaozana rehetra ireo dia mila fiaraha-miasa indrindra ho antsika katolika izay maniry hampiroborobo io vohikala io. Tsy mitsahatra miantso an'ireo izay afaka hanampy izahay, na dia amin'ny fandikan-teny momba ireo tantaran'ny olomasina ihany aza. Koa raha misy vonona dia afaka mifandray aty aminay hatrany amin'ny contact@katolika.org
Isaorana be dia be koa moa ireo izay efa nanomboka nifanampy aminay tamin'ny lafiny rehetra.
"Ho tonga anie ny fanjakany"